Waraysi-Weriye ruug caddaa ah oo kamid ah qaxootiga Yemen ee Boosaaso jooga. – Radio Daljir
Agoosto 6, 2016 2:24 b 0
Boosaaso, Aug 06 2016—Cali Cabdoow Qaasin Xuseen Waxa uu kamid ahaa dadkii kasoo cararay dagaalada sokeeye ee dalka yaman kadhacay waa saxafi mudo 25 kujiray mihnada saxaafada Waxaa uu ushaqeen jariid mucaarad ah oo lagu maga caabo Al waxdaawi oo kasoobaxa dalka yaman.
Cali cabdoow Qaasim ahaa Waxa uu kawaramay Waayo aragnimadii iyo qibradii uu ka dhaxlay shaqdii uu hayay madabadii uu ka shaqaynjiray jariirada Alwaxdaawi oo ahayd jriirad Mucaarad ku ahayd Dawladii Cali Cabdala saalaxa.
Cali Cabdoow Qaasi ayaa Waxa uu sheegay in mudadii shaqada uu kuguda jiray uu lakulamy xari jirdil iyo handadaad taasna ay kudhalisay in dalkiisa uu isaga soo cararo isaga iyo qooyskiisaba.
Hadaba Wariye Xasan Heykal oo kusugan Xarunta Daljir Bosaaso ayaa lakulmay Cali cabdoow Qaasim Waxaan uu ugu horeen sida Puntland loogusoo dhaweeyay isgaga iyoqoyskiisa yo waxa uu kala kulmay.